dawei thar lay
Welcome to my blog ထားဝယ်သားမောင်ရေချမ်းဆိုက်မှကြိုဆိုပါတယ်
ငါရူးဝမယ်ဝယ်ရား.Dawei Paing !
Posted by ရေ ချမ်း at 6:37 AM0comments
Posted by ရေ ချမ်း at 6:31 AM0comments
ထားဝယ် ပိုင်ရဲ့ (တမ်းတမိတယ်)
Posted by ရေ ချမ်း at 6:30 AM0comments
Posted by ရေ ချမ်း at 6:28 AM0comments
2012 ထားဝယ် တန်ဆောင် တိုင်ဘုရားလှည့် မှာ
အလှူဆိုတဲ့ ဒါန တွေ ကို ထားဝယ် တွေ
စိတ်ထားဖြူစင် စွာ နဲ့လှူဒါန်းနေကြတာ မြင်နေရတယ်
စိတ်ကြည်နူးဖွယ် မြင်ကွင်းလေးတွေ ပါ
ထားဝယ် တွေ စိတ်ထားဖြူစင် လွန်းကြပါတယ်
ထားဝယ်တွေ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ
Posted by ရေ ချမ်း at 5:10 PM0comments
နယ်သာလန်မှ ကျုလစ် ပန်းဥယျာဉ်
Posted by ရေ ချမ်း at 8:35 PM0comments
အိမ်ကနေ အမြဲ ကျနော် ကိုစိတ်ပူနေတတ်တဲ့အမေ ကိုလဲသတိရတယ်
အမြဲ ကျနော်ကိုစိတ်ပူစွာနဲ့ မကောင်းတာမလုပ်မိအောင်အမြဲဆူတတ်တဲ့
အဖေ ကိုလဲ သတိရတယ်
ကိုကြီး ကိုကြီးနဲ့ ခေါ်တတ်တဲ့ မောင်နှမများကိုလဲ သတိရတယ်
သင်္ကြန် နားနီးနေပြီဆိုတော့ အိမ်နားကပိတောက်ပင်အကြီးကြီး
သူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကို တကယ်ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ 
Posted by ရေ ချမ်း at 9:26 AM0comments
မြန်မာပြည်က အရှင်သောမ အကြောင်းကို အွန်လိုင်းပေါ်တင်လိုက်ပါဦးလို့ဘော်ဒါတယောက်ပို့ လာတာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မြန်မာပြည်က အရှင်သောမ အကြောင်းကို အွန်လိုင်းပေါ်တင်လိုက်ပါဦး
အခု မအနတွေကို ငွေလာဘ်ထိုးနေတယ်
အခု သထုံကိုရောက်လို့ အကြောင်းစုံသိရတယ်
အရင်က စစ်တပ်မှာ ထောက်လှမ်းရေး
လူကုန်ကူးလို့ ဖမ်းခါနီးမှာ ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်တာ
အခုလည်း အိန်ဒိယမှာ ကုမ်ပဏီထောင်ထားတယ်
ABC: အခု မအနတွေကို လာဘ်တွေထိုးနေတယ်
ဦးသာသန: အသေးစိတ်ကို ပိုပြီးသိချင်တယ်
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူက ကိုယ်တို့နဲ့ အဆက်သွယ်ရှိတယ်
ဦးသာသန: အသေးစိတ်ကို သေချာပို့ပေးပါ
ABC: အဲဒီမှာ နေလစာစောင်မှာ သူက အဲဒီကကျောင်းထိုင်ပါဆိုပြီး လိမ်ပြီးရေးခဲ့လို့ ပြသ်သနာတွေ တက်ကြတယ်
အဲဒီကနေ ဘိတ်ကို ပြေးတယ်
အခု ဘိတ်မှာ မနေရဲလို့ ရန်ကုန်ကို ပြေးတယ်
ရန်ကုန်တောင်မှ ကဘာအေးမှာ ၀ါဆိုတာ
ဦးသာသန: ဒါဆို တပည့်တော် စုံစမ်းမယ်
ABC: ထာဝယ်မှာ သံဃာတွေကို ပင့်ပြီး ပိုက်ဆံ 100000 စီကို အတုလုပ်ပြီးလှူတယ်
ဦးသာသန: အခု အိန္ဒိယ သံဃာတွေကိုလည်း သူက စည်းရုံးနေတာ
ဦးသာသန: တပည့်တော် စိတ်ဝင်စားသွာြးီ့
ABC: အခု တပည့်တော် သထုံ ဇင်းကျိုက်မှာ ရောက်နေလို့ သူနေခဲ့တဲ့ ကျောင်းက မနေ့ညက ဖုန်းလို့ အကုန်သိရတယ်
ဦးသာသန: ငါ့ရှင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ လက်တွဲမယ်
ငါံရှင်က မြန်မာနိုင်ငံ က သတင်းတွေကိုပို့
ကိုယ် က အိန္ဒိယ မှာ လှုပ်ရှားမယ်
ABC: အိန်ဒိယမှာ ကုမ်ပဏီထောင်ထားတယ်အခု ဗိုလ်မှုးတစ်ဦးနာမည်နဲ့
ဦးသာသန: ဘုရားဖူးတွေလည်း သူလည်း ခပ်တည်တည်လုပ်နေတာ
ABC: မေးက တပည့်တော်ပိတ်မိထားလို့ အ၀င် အထွက်မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ဦးသာသန: အိန္ဒိယ မှာ ကိုယ်က အခုရှိနေတယ်
ABC: ဘုရားဖူးတွေကို သူက စည်းရုံးနေတာ
ဦးသာသန: နောက်ရက် ပို့ထားပေးပါ
ABC: အဲဒါကို မေးဖြန့်ပြီး မက်ဆေ့တွေ ဖြန့်ပါနောင်ကြီး
ဦးသာသန: အခု သေချာသိရင် ကိုယ် လုပ်တော့မယ်
ABC: အခုလ 20 ရက်နေ့ မအန အစည်းအဝေးရှိတယ်
အဲဒီမှာ သူက လာဘ်ထိုးနေပြီ
ဦးသာသန: မေးကနေ မက်ဆေ့ထက် ပိုပြီးပြန့်အောင် ဖြန့်ပေးမယ်
ABC: အခု တော်တော်များများကို လာဘ်ထိုးပြီးသွားပြီ
နောက်ထပ်ရောက်မယ့် မအနတွေကို လာဘ်ထိုးဖို့စောင့်နေတာ
ပိုက်ဆံ 100000 အတုတွေကို နောက်မှ ငွေ 20000 နဲ့ သွားပြန်လဲတယ်လေ
ဦးသာသန: တပည့်တော်တို့လည်း သူ့ကို သိပ်မယုံဘူး
ထားဝယ် သူ တွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေတာ
အဓိက ဓမ်မစကြာရိပ်သာကျောင်းကို သိရင် ပိုကောင်းမယ်
တပည့်တော် နောက်နေ့မှ ဖုန်းနံပါတ်ယူလာမယ်
ဦးသာသန: အိုကေ ဦးဝိဇယ
Posted by ရေ ချမ်း at 12:29 PM0comments
Posted by ရေ ချမ်း at 3:47 PM0comments
Posted by ရေ ချမ်း at 2:57 PM0comments
မြန်မာပြည်က အရှင်သောမ အကြောင်းကို အွန်လိုင်းပေါ်တင်လိုက်ပါဦး တော်တော်ဆိုးတယ် အရှင်သောမ ဆိုတာသိလား တရားဟောတဲ့ထားဝယ်ဆရာတော်လေ အခု မအနတွေကို ငေ...
၁။ထားဝယ်လူမျိုးအချင်းချင်း ​ ညီညွတ်မှုရရှိရေး ၂။ထားဝယ်လူမျိုးများ မရှင်းမလင်းဖြစ်နေသော ထားဝယ်ဆိုတာ လူမျိုးတစ်မျိုးဆိုတာ ထားဝယ်လူမျိုးတိုင်း မ...
At first glance, it looks likeagiant child armed withabox of crayons has been set loose upon the landscape. Yet far from b...
ထားဝယ်ဆိုတဲ့မွေးရပ်ဇာတိမြေကိုအရမ်းသတိရလွမ်းဆွတ်နေမိတယ် သွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာတွေစားခဲ့ဖူးတဲ့အစားစားတွေ လျှောက်လည်ခဲ့ဖူးတဲ့နေရာတွေ အိမ်ကနေ အမြ...
ဂျီတော့ကွန်နက်ရှင်ကျလို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါကအရေးကြီးဖြစ်နေပါက အကူအညီရနိုင်တဲ့ဂျီတော့.နှင့်တစ်ခြားအရာများလဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့wed လေးတွေပြောပြပါမယ်...
ပန်းဆိုတာ... လှတယ်တဲ့။ ပြီးတော့... မွှေးလည်း မွှေး တယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့်... အားလုံးက နှစ်သက် မြတ် နိုး ကြ တာ ဆိုပဲ။ နေ့တနေ့ ပွင့်သစ် လာ ပြီ ဆို ...
၀က်ဆိုဒ်လမ်းညွှန်းမှုဆိုင်ရာလိပ်စာများ ပညာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန့်များ » www.pearsonpte.com မြန်မြာ ပည်တွင်းအွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာ 4scal...
မြန်မာများနှင့် ထားဝယ်အတော်များများက ထားဝယ်လူမျိုးများကို ဗမာ လူမျိုးစုဟု ယူဆနေကြသည်။ ထားဝယ်များကိုယ်တိုင် ဒီလို အမြင်ရှိမှတော့ မြန်မာများယူ...
ထားဝယ်မြို့ မှ ဗုဒ္ဒ ယဉ်ကျေးမှုအခြေပြု သင်တန်း အကြောင်းvideo
Latest tracks by tavoy songs
DriverScanner 2011 ဆောစ့်ဝဲလ်နှင့်Genuine Activator for Windows XP Vista and Win7- DriverScanner 2011 ဆောစ့်ဝဲလ်နှင့်Genuine Activator for Windows XP Vista and Win7- အား အမျိုးကောင်းသား ရေးသားပါသည် သြဂုတ် 25, 2011 at 6:57am -ေ...
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော် ၃၀ ကျော် အဖမ်းခံထားရဆဲ - Published on January 17, 2012 by webteam · No Comments ဒီဗွီဘီ သတင်းဌာနမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ဇန်နဝါလီလ ၁၃ ရက်နေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ ကျောင်းသားတပ်မတော် ...
သဘာဝ အလှတွေနဲ့ လွမ်းမောစရာ ထားဝယ်မြေ... -
2PM - Don't Stop Can't Stop (2010) - MTV ကြည့်ရန်... Don't Stop Can't Stop - 2PM (MTV) Without U - 2PM (MTV) 2PM ရဲ့ Third Album လေးပါ...:) 01. Don't Stop Can't Stop - 2PM 02. Without U - 2PM ...
ပြက္ခဒိန် - ကြည့်နေရင်း အတွေးတွေ ဇက်သတ်မရ ၂၀၀၉ သူသက်တမ်းစေ့သွားပြီ မြင်ကွင်းမှ သူပျောက်ကွယ်သွားပြီ သူ့ရဲ့ အချိန်ကန့်သတ်ချက်ပြည့်သွားပြီ သက်တမ်းစေ့သွားသည်နှင့် အသုံးဝင်မှု...
Hip Hop သီချင်းဆိုက် ရှယ်ဘဲသွားကြည့်လိုက်အုံးနော်